Muslims should even thank DASSK for NOT speaking up for Muslims as dirty Bama Buddhist Military leaders would increase their atrocities to get the people away from NLD | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်သောင်းနဲ့ ဘီလီယံဒေါ်လာ ပိုင်ဆိုင်မှု (ဒုတိယပိုင်း)
မွတ်စ်လင်မ် ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ဆက်နွှယ်သဖြင့် ဦးအောင်သောင်း အမည်ပျက် စာရင်းသွင်းခံရမှု (Analysts) »
Muslims should even thank DASSK for NOT speaking up for Muslims as dirty Bama Buddhist Military leaders would increase their atrocities to get the people away from NLD
I am NOT satisfied with DASSK and NLD’s politics but as she is the ONLY one best healthy uninfected person amongstaleper community. “A nu taw_lu chaw” I just wish to shape by pointing out with my2cents’ worth views which she may be not noticed at all.
But I hope I could communicate with the International community, fellow like minded good Myanmars and my Muslim friends. Even if my efforts and opinions could becomeabrick oragrain of sand for the future Myanmar’s peace, reconciliation, politics and progress…I would be happy. …
And for DASSK I admired her, love her and understand her difficulties. Even now she was unfairly called Moot Suu, Hajima Daw Suu and NLD as Moot Dawn…all the racial slurs thrown to her by the Myanmar Military leaders to get the votes from “Patriotic”, ultra-Nationalist people.
Actually Muslims should even thank her for NOT speaking up for Muslims as dirty Bama Buddhist Military leaders would increase their atrocities: Genocide, Massacre and Islamophobic Hate Crimes just to get the people away from NLD.
Master Pie with NY Kogyi and 47 others
ရွာလယ်ခေါင်က ကွင်းထဲ ယောင်္ကျားလေးတွေ ဘောလုံး
ကန်ကြ။ စစ်တိုက်တန်းဆော့ကြ ။
အပျိုဖျန်းက ဝင်ဆော့ချင်ပါတယ်ပြောတော့ အားလုံးက
သူက အနောက်ဖက်က မြို့က ဦးလေး အချစ်တော်လေ။
မုန့်ဖိုးတွေ အများကြီးရတယ်။ ခုကန်နေတဲ့ဘောလုံးတောင် သူ့ဦးလေးက လှုထားတာ။
သူ့ဦးလေးက အချစ်တော်တူမ လည်း ဝင်ကစားနေရှာပါတယ် လို့မြင်ဖို့လုပ်ရတာ။
ဒါပေမဲ့ သူကတော့ အမြင်ကပ်ရင်ကပ်သလို မကြာမကြာ
အိမ်တွေထဲ ဘောလုံးဝင်သွားရင် လိုက်တောင်းပန် ပြန်တောင်းပေးရတယ်။
အော် ဗူးသီးကြွက်ကိုက် ဘဝ မှာပျော်နေရှာတာလေ။
နိုင်ငံရေး ဗူးသီးကြွက်ကိုက် လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။
အ တာ လို့ခေါ်တယ်။
This entry was posted on November 5, 2014 at 2:27 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.